गल्लीमै गुडछ सरर…………. – देशदृष्टि
गल्लीमै गुडछ सरर………….
Posted bymilanbagale November 19, 2010 Posted inUncategorized
(शब्द/तस्वीर : मिलन बगाले﻿)
यसपालीको घर बसाई र धेरैतिरका गाउ घुमाईमा केही रमाईला दृश्य देख्न पाईयो । गाई भैसी हिडने गाउका﻿ डहरलाई डोजरले डामेको दृश्य । यो निकै लोभलाग्दो र रहरलाग्दो थियो । बिकासको सप्पै भाग शहर एक्लैले खाएर आफुलाई भोकै पारेको दुखेसोसहित गाउले आफैले चन्दा उठाएर घरघरै बाटो पुग्नेगरी डोजर लगाएको दृश्य बास्तबमै रहरलाग्दो थियो ।
बाटो भएपछि त गाउले जिवन पनि धेरै सजिलो र स्वादिलो हुने रैछ । मोटरसाईकलमा घासको भारी बाधेर लगेको दृश्य हुदै गाउका तरकारी र दुध मोटरसाईकलले गाउबाट नजिकका शहरतिर ओरालेको मजाले देख्न पाईयो । ‘कसैलाई केही हारगुहार पर्या भे मोबाईला फुन हान्देपछि उत्तिनखेरै गुटुटु ‘!!! , हो आजकाल गाउमा मोटरसाईकल महिमा यसरी नै गाईन्छ । बेलैमा अस्पताल पुर्याएर कतिको त ज्यान समेत बचाको रैछ येल्ले । टयाक्टरले घरघरै धानपराल पुर्याउने काम त दालभात नै भएछ ।रेमिट्यान्सकी जय ! भैसी बाध्ने किलोको आडैनेर धेरैजसोले कालो मोटरसाईकल पनि धोईपखाली टलक्क टल्काएर राखेका छन गाठे । पैसोले गरेछ काम।
अब यो फोटोको दृश्यतिर लागौ । दृश्य तनहुको एक गाउ घुम्दाको हो । मोटरसाईकलको फेसनले उत्पातै गाजेर गाउलाई अब डोजरले डामेको बाटोसमेत नचाहिने भएछ । तस्बीरमा घरको तगारोनेर दुईटा मोटरसाईकल मजाले अडयाएर राखेको देखिन्छ तर मोटरसाईकल आउने बाटो भने मुश्कीलले दुई – साढे दुई फिटको गल्ली । अग्लो ठाडो र भिरालो सिढि नाघदै मुलबाटो मोटरसाईकल चढेर भेटनु साच्चीकै कष्टकर छ यो गाउमा । यस्तो धरापमा मोटरसाईकल हाक्नुभन्दा यसलाई पनि डोजरले डामेर सिनित्त पार्ने हो कि?
कुनै बेला गाउमा ‘खच्चड’ भगवान थियो यतिबेला यो ‘दुईपाङग्रे घोडा’ गाउलेको दुखसुखको असल साथी बन्या रैछ । यसको जय होस ।
तो केजाती बजेट न’आर हो बाबु हाम्ले भत्ता नपाको ?